Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo China Manufacturer
Incazelo:I-Brush Sets Makeup,Izikhwama ze-Brush for Makeup,I-Makeup Brush
Home > Imikhiqizo > Setha ukusetha > 3pcs Ukusetha kwe-Brush > Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo
I-Model No.: YC026
Lokhu lokhu Umbala we-Champion 3pcs ibhulashi usetha izimonyo, lokhu kusetha kudala ubuso obunamathele, izihlathi ezithandwayo ngokwemvelo kanye nezindebe ezithambile ngokubukeka okuncane kodwa okwamanje.
Ibhulashi elithambile, elincanyana, elincane elenziwe nge-powder powder. Ewusizo ekusebenziseni ama-powders ubuso, ama-powder blushes nama-bronzers. Ifomu layo eligcwele futhi eliyindilinga ngobumnene lifaka i-powder esikhumbeni.
I-angled flat, isibambo eside, isibhamu esenziwe nge-angled. leyo shayela ekhonjiwe isebenza ngemikhiqizo ye-powder, imikhiqizo ye-liquid noma ye-cream kuzo zonke izindawo zobuso. Le shayela elikhonjiwe lenzelwe ukwenza ngokusemthethweni isisekelo kunzima ukuthola izindawo zobuso, njengezungeze emakhaleni nasezindaweni eziphambanisayo ezifana ne-cheekbones nomugqa wempuphu.
Ibhulashi elincanyana, elide eside, elenziwe ngobuciko. Imininingwane iqhubhisa ama-buffs futhi ihlanganisa ukucwenga esikhunjeni ukusula imibuthano emnyama, izibhamu, ubomvu kanye nezinye ukungapheleli kwesikhumba. I-brush ye-vegan ingasetshenziselwa ukugqamisa ngokucacile nokuthunga izimpondo, ama-cheekbones nezindawo zomugqa wendlala.
I-electroplating handle ipulasitiki
I-Brush Sets Makeup Izikhwama ze-Brush for Makeup I-Makeup Brush